Inona no atao hoe Drupal? | Bilaogy MarTech
Mijery ve ianao Drupal? Efa nandre momba an'i Drupal ianao fa tsy azonao antoka hoe inona no azony atao aminao? Moa ve mahafinaritra be ilay kisary Drupal ka te ho anisan'ity hetsika ity ianao?
Drupal dia sehatra fitantanana votoaty misokatra loharanom-pahefana mamorona tranokala sy rindranasa an-tapitrisany. Izy io dia naorina, ampiasaina ary tohanan'ny vondrom-piarahamonina mavitrika sy maro karazana manerantany.
Manoro hevitra ireo loharanom-pahalalana ireo aho mba hanombohana hianatra bebe kokoa momba ny Drupal:
Ny torolàlana farany ho an'i Drupal ™ - Fiofanana Tutorial Video iray isaky ny dingana izay mampiseho anao ny tsiambaratelon'ny lalan-kely maharesy… ao anatin'ny 6 ora, ary tsy misy aretin'andoha!
Video: Dries Buytaert, mpamorona an'i Drupal, dia nanangona valiny isan-karazany mba hanampiana amin'ny famaliana ilay fanontaniana efa antitra “Inona no atao hoe Drupal“. Ity horonan-tsary fohy ity dia manome fomba fijery sy fomba fijery mikasika ny fomba hanatonan'ny mpamorona, mpamorona, mpanova ary mpamorona atiny ao amin'i Drupal. Ity horonan-tsary fohy ity dia avy amin'i Dries Buytaert's keynote tao amin'ny DrupalCon Chicago, 7 martsa 2011.
Book: Mampiasa Drupal manome ohatra fampiharana amin'ny tranga isan-karazany amin'ny fampiasana tranonkala, manomboka amin'ny fananganana tranokala famerenana vokatra ka hatramin'ny fananganana magazay an-tserasera. Ireo ohatra dia mampiasa maro amin'ireo nanome modely namorona ny fiarahamonina Drupal.
Andian-tsarimihetsika Drupal Podcast
The Drupal Feo Ny andian-tsarimihetsika podcast dia manome fomba fijery fohy momba ny zava-mitranga eo amin'ny fiarahamonina, ny teknolojia ampiasaina, ary ny fivoaran'ny modules.
The Podcast Lullabot Ny andian-dahatsoratra dia miditra lalina amin'ny fampiharana ny tranonkala miaraka amin'i Drupal ary toerana ifantohan'ny olona mahaliana amin'ny fampivoarana ny modely sy ny famoronana tranokala mahafinaritra.
Zahao ity infographic lehibe ity amin'ny tantaran'ny Drupal avy ao Serivisy tranokala CMS:
Tags: angela byronCMSdries byutaertdrupaldrupal cmspodcast drupalpodcasts drupalfeo drupalfivoaran'ny drupaltantaran'ny drupallullabot podcastmampiasa drupal
Sep 19, 2012 ao amin'ny 2: PM PM
Vao avy nifindra tamin'i Joomla aho ary miombon-kevitra aminao tanteraka aho John, Drupal ihany no tsara indrindra. Ahoana no hahazoako Mifanakalo hevitra momba ny bilaogiko - http://www.iconicdigitalmarketing.com